July Dream: 2007
Posted by JulyDream at 11:51 PM No comments:
Posted by JulyDream at 7:55 PM No comments:
Posted by JulyDream at 8:16 AM No comments:
If you make the world
you also will haveagreat joy.
ကမ္ဘာလောကကြီးကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးလျှင် သင်လည်း ကြီးမားသော ပျော်ရွှင်မှုကို ရလိမ့်မည်တဲ့.... ဟုတ်ပါတယ် နော်...
လူဆိုတာ အခြားသူတွေကို ပျော်ရွှင်စေခြင်းဖြင့် မိမိအတွက် ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရရှိနိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။ သူတစ်ပါးအရေးကို စေတနာ သန့်သန့်လေးနဲ့ ကူညီပေးပြီးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်နှလုံးမှာလည်း ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ၀မ်းမြောက် ကြည်နူးမှုတွေ အလိုအလျောက် ရရှိကြပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ကြည်နူးမှုတွေ ဆိုတာ လူသားတွေအတွက် အမြင့်မားဆုံးသော ခံစားချက် ဆုလာဘ်လေးပဲလေ။
"အများကောင်းကျိုး သယ်ပိုးမည့်သူမှာ ကိုယ့်ကောင်းကျိုးပါ သေချာပြီး ဖြစ်ပါတယ်" တရုတ်အတွေးအခေါ် ပညာရှင်ကြီး ကွန်ဖြူးရှပ်ကလည်း အဲဒီလို ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ သူ ဆိုလိုတာက အများအကျိုးဆောင် ကိုယ်ကျိုးအောင် ဆိုတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ တချို့တလေက အများအကျိုးဆောင် ကိုယ်ကျိုးပြောင်လို့ နောက်ပြောင်ကျီစယ်တတ်ကြပါတယ်။ အမြီးကျန် အမြီးစား... ခေါင်းကျန် ခေါင်းစား... နိုင်ရာစား လောကကြီးမှာ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ အများအကျိုးဆောင်ရင် ကိုယ်ကျိုးပြောင်တာ တကယ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတစ်ပါးအရေးကို ကိုယ်အရေးလို သဘောထား ကူညီရင်း ကိုယ့်ဘေးပတ်လည်မှာလည်း တပျော်တပါး ၀ိုင်းဝန်းကူညီမယ့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ ၀န်းရံလာမှာပါ။
တကယ်တော့ လောကမှာ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ အောင်မြင်မှုဆိုတာ သူတစ်ပါးကို တက်နင်းနိုင်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ပါးသူကို အနိုင်ရလိုက်တိုင်း အောင်မြင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ရဲ့ သန်စွမ်းတဲ့ လက်တွေကို ဆန့်တန်းပြီး အလှမ်းမမှီသူ၊ လိုအပ်နေတဲ့သူကို ဆွဲယူခေါ်တင်ပေးနိုင်ခြင်းမျိုးသာ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ အောင်မြင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
လောကမှာ ကိုယ့်တစ်ကိုယ်တည်းအတွက် အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဟာ ရှုံးနိမ့်သူတွေပါပဲ။ ဓနစည်းစိမ်တွေ၊ ရာထူးတွေ၊ အာဏာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ မြင့်မြင့်မားမား ရနေခဲ့ပါစေဦးတော့ သူဟာ တကယ့်ကို ရှုံးနိမ့်သူတစ်ဦးပါပဲ။ သူတစ်ပါးအတွက် အသက်ရှင်နေတဲ့သူမျိုးတွေမှ စစ်မှန်တဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရရှိမယ့်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ ဓနစည်းစိမ်၊ သြဇာရှိန်ဝါတွေကို လောက ကောင်းကျိုးအတွက် အသုံးချနေတဲ့ ကြွယ်ဝသူတွေ... ဓနစည်းစိမ်နဲ့ သြဇာရှိန်ဝါ မကြွယ်ဝပေမယ့်လည်း ကိုယ့်အစွမ်းနဲ့ စေတနာကို သူတစ်ပါးကို ပေးကမ်းနိုင်တဲ့ သူဆင်းရဲတွေဟာ လောကမှာ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ အောင်မြင်သူတွေပါ။ တကယ့် ဟီးရိုးတွေပါ။
အဲဒါကြောင့် မိမိအတွက်ချည်း အရေးကြီးမနေ၊ မိမိကိစ္စချည်း တွေးပူမနေပဲ တခါတရံ သူတစ်ပါးရဲ့ အရေးကိစ္စနဲ့ ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတတ်တဲ့ အကျင့်ကလေး မွေးမြူကြပါ။ တစ်ကိုယ်ရေ သောကလှောင်အိမ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကျဉ်းမချထားစေလိုပါ။ လူတစ်ဖက်သားကို ကူညီလိုက်ခြင်းဖြင့် ပီတီကို ခံစားရရှိနိုင်သလို ကိုယ်ရဲ့ သောကလှောင်အိမ်ထဲကလည်း အခိုက်အတန့် လွတ်မြောက် သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by JulyDream at 6:00 PM 1 comment:
ပွင့်လင်းမှု... မြန်မာစာလုံးလေး ၃ လုံးထဲပါ။
ဒါပေမယ့် ဘ၀မှာ အတော်လေးကို ခရီးရောက်တဲ့ စကားလုံးလေးပါ။
လျှို့ဝှက်အပ်တဲ့အရာကို လျှို့ဝှက်ထားမှ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုထားတာလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါလည်း မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အရာကို ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ လျှို့ဝှက်ထားမယ် ဆိုတာကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ များလာရင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များလာပြီး ဦးနှောက်ပွင့်ထွက် သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးနှောက်ကြီး ပွင့်ထွက်မသွားခင် လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ လိုအပ်သလို ပွင့်လင်းမှုလေး ရှိသင့်ပါတယ်။ အသာအယာလေး ရင်ဖွင့်သင့်ပါတယ်။
ပွင့်လင်းမှုအပေါ်မှာ အိမ်ထောင်သည်အစ်မ တစ်ယောက်က ကျွန်တော်ကို ဒီလို ပြောပြဖူးတယ်။
''ကိုယ့်ဘက်တောင် မပွင့်လင်းတာရှိတယ် လင်မယား ဆိုပြီး ကကြီး ကနေ အ အထိ ပွင့်လင်းလို့တော့ မရဘူး။ အဓိက ကတော့ မလိမ်ရင် တော်ပြီလို့ ခံယူထားတာဘဲ။''
နောက်ထပ် အိမ်ထောင်သည် အစ်မတစ်ယောက်က ပွင့်လင်းမှုအပေါ် ဒီလို မြင်ပါတယ်။
''ပွင့်လင်းဖို့ထက် ရိုးသားဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ သူ ကိုယ့်ကို မပြောဖြစ်ပေမယ့် မရိုးမသား ကွယ်ဝှက်ထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အေးအေးဆေးဆေး လက်ခံရလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကလည်းပဲ သူ့ကို အကုန်အစင် မပြောဖြစ်ရင်လည်း သူဘာမှ လာမဖြစ်နဲ့။ ကိုယ့်သဘောကတော့ အတွင်းစိတ်ရော အပြင်သဘောပါ ရိုးသားဖြူစင်ရင် သစ္စာရှိရင် ဘာကိုမဆို ကြည်ဖြူခွင့်လွှတ်မယ်။''
ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့ ပွင့်လင်းမှုဆိုတာကလည်း အဲဒီအစ်မပြောသလို... "က"ကနေ "အ"အထိ အကုန်လုံး ပြောပြနေဖို့ကို မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စိတ်အခန့်မသင့် ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေ၊ တစ်ဦးရဲ့ အမူအရာ၊ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင် စတဲ့ တစ်ခုခုကို ကျန်တစ်ဦးက သဘောမတွေ့ ဖြစ်တဲ့အခါမျိုး စတဲ့ အခြေအနေလေးတွေမှာ ပွင့်လင်းစေချင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ပွင့်လင်းမှုမရှိပဲ မြုံနေမယ်ဆိုရင် အစိုင်အခဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအစိုင်အခဲ တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတဲ့ တစ်နေ့မှာ ပေါက်ကွဲလာမယ့် ပြင်းအားက မနည်းလောက်ဘူးလေ။ တကယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့သာ ညှိနှိုင်းလိုက်ရင် အဲဒီကိစ္စဟာ တစ်ခါတည်း ပြီးသွားနိုင်ပြီး နောင်လည်း ဖြစ်ဖို့ ခဲယဉ်းသွားနိုင်မယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ပြီးတော့ တစ်ခါတရံမှာ ကိုယ့်ဖက်ကပဲ တစ်ဖက်သက်မြင်ပြီး ထင်နေတတ်တဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေလည်း ရှိနေတတ်တယ် မဟုတ်လား။ ပြုလုပ်မိသူ အနေနဲ့ကတော့ တစ်ချို့အပြုအမူလေးတွေဟာ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ဆိုပေမယ့် ကျန်တစ်ဦးအတွက် သဘောမတွေ့စရာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ပွင့်လင်းမှုကနေ တဆင့် ဆင်ခြင်စရာလေးတွေ ဆင်ခြင်သွားလို့လည်း ရနိုင်မယ်လေ။
နောက်တစ်ခုက အားလုံးပြောနေကြသလို အရာရာကို ပွင့်လင်းနေဖို့လည်း မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပဲ ရိုးသားသူ ဖြစ်နေပါစေ ကြာလာတဲ့အခါမှာ တစ်ဖက်မှာ သံသယဆိုတာ အချိန်မရွေး ၀င်လာနိုင်ပါတယ်။ ပြောသင့် ပြောထိုက် ပွင့်လင်းသင့် ပွင့်လင်းထိုက်တာတွေကို မပွင့်လင်းမိခဲ့ရင်တော့ ဘယ်လောက် ရိုးသားနေပါစေ သံသယတော့ အ၀င်ခံရမှာပါပဲ။ သံယသတစ်ခု ၀င်လာပြီဆိုတာနဲ့ အနည်းနဲ့ အများတော့ ပူလောင်ကြရမှာပါလေ။
အဲဒီလိုပါပဲ သမီးရည်းစား ဘ၀မှာလည်း ပွင့်လင်းမှုရှိသင့်ပါတယ်။ အဲဒီ သမီးရည်စားဘ၀ ပွင့်လင်းမှုအပေါ်ကို ညီမငယ်တစ်ယောက်က ဒီလို ပြောပြဖူးပါတယ်။ စဉ်းစားစရာလေးပါပဲ။ "သမီးရည်းစား ဘ၀မှာတော့ ပွင့်လင်းမှု မရှိရင် အတော်ဆိုးတယ်။ အပွင့်လင်း လွန်းအားကြီးရင်လဲ မဖြစ်ပြန်ဘူး။ ဘယ်နေရာ မဆို အလယ်အလတ်ပဲ ကောင်းမယ် ထင်တာပဲ။ တချို့ကိစ္စတွေမှာ ပြောသင့်တာ အသိပေးသင့်တာ ရှိသလို ၊ တချို့ကိစ္စတွေ ကျတော့လဲ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး တိုးတိုးတိတ်တိတ် လုပ်ရတာလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ် အားငယ်နေတာမျိုး ရှိခဲ့ရင်တော့ သူ့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကိုယ့်အခက်အခဲကို ဖွင့်ပြောသင့်သလို၊ သူ့ဘက်က အားငယ်နေတာမျိုး အဆင်မပြေမှုမျိုး ရှိခဲ့ရင်လည်း ကိုယ့်ကို ဖွင့်ပြောသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်လုံး မျက်နှာလိုက်ကြည့်ပြီး စာဖတ် သူ့အကြိုက် လိုက်ရအောင်က တခါတရံ အဖတ်လွဲ သွားတတ်တာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။"
ဒါကြောင့် တိုတောင်းလှတဲ့ လူဘ၀လေးမှာ သံသယတွေနဲ့ ပူလောင်နေမယ့်အစား ပွင့်လင်းသင့်သလောက် ပွင့်လင်းကြပြီး အေးချမ်းသာယာကြပါစေဗျာ။
Credit: Mr. Young (Native Myanmar)
Posted by JulyDream at 1:30 PM4comments:
Posted by JulyDream at 5:59 PM6comments:
raeaeEdkifbavmhrSm tvnfwpfacguf a&muf&if; olUbavmhrSm wifxm;wJh The Blog Readability Test ydkUpfudk zwfrdygw,f/ tJ'geJU uRefawmfh bavmhudk zwfzdkUtwGuf t&nftcsif; tqifhb,favmuf &dSrS em;vnfr,f qdkwmudk prf;oyfMunfUcJhygw,f/
jrwfpGmbk&m;.. uRefawmfbavmhudk zwfvdkU *sD;eD;,yftqifhavmufrS &r,fqdkawmh uRefawmf bmawGrsm; tqifhjrifhjrifh a&;rdcJhovJayghaemf/ trSefu tJ'DavmufvJ cufcJeufeJwmawG ra&;xm;ygbl;aemf/ MunfU&wm jrefrmpmvHk;udk bmomrjyefEdkifvdkU t&rf;cufoGm;w,f xifw,f/ tJ'geJU bmomjyefzdkU em;rvnfwmawG rsm;vGef;wJhtwGuf 'Dbavmhudk zwfzdkU *sD;eD;,yfpftqifh &dSzdkUvdkw,fqdkNyD; t&l;bHkajrSmuf ay;vdkufwmrsm;vm; rodbl;/
tJ'D prf;oyfrIu bmudktajccHNyD; tqifhawG owfrSwfay;ovJ qdkwmudkawmh uRefawmf rodygbl;/ olqDrSm udk,f&JUbavmh vdyfpmudk &dkufxnfUay;vdkuf&HkyJ vdkygw,f/ olUbmom ppfaq;wGufcsufNyD; tckvdk tqifhowfrSwfay;wmyg/ uJ udk,fhbavmhudk b,fvdktqifh&dSrS zwf&Iem;vnf vG,frvJqdkwmudk odcsif&if 'Dae&mrSm oGm;a&muf prf;oyfMunfUEdkifygw,f cifAsm/ aysmf&TifEdkifMuygap...
Posted by JulyDream at 11:11 PM5comments:
အဆိုတော် ခင်မောင်ထူးရဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ တေးရေးကတော့ ကိုလေးလွင်ပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ခင်မောင်ထူးရဲ့ ခေါင်းလေးလှုပ်ပြီး သီချင်းဆိုတဲ့ သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကို သတိရမိပါတယ်။ ငယ်ဘ၀မှာ အဲဒီသီချင်းလေးတွေ နားထောင်ရင်း စိတ်ကူးယဉ်မိခဲ့တာပေါ့လေ။ ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက ဆရာဝန်လုပ်ဖို့ စိတ်မပါခဲ့ဘူး။ ဆေးကျောင်းသားတွေရဲ့ စာပိရတဲ့ဒဏ်ကို မခံစားချင် မလိုချင်သလို မေ့တတ်တဲ့အကျင့်ကြောင့် ဆေးမှားပေးပြီး လူသတ်မိမှာလည်း ကြောက်မိပါတယ်။ လူနာတွေကို ဆေးကုဖို့ စိတ်မ၀င်စားတာကလွဲလို့ ကျန်းမာရေး အသိပညာတွေကိုတော့ လိုချင်မက်မောမိခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်တိုင် ဆရာဝန် မဖြစ်ရလည်း အနည်းဆုံး ဆရာဝန်မ ခင်ပွန်းတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့။ ဆယ်တန်းအောင်လို့ တက္ကသိုလ်တွေ တက်ရရင် မောင့်ဆေးကျောင်းသူလေး တစ်ယောက်တော့ရအောင် ဆေးကျောင်းမှာ ဆေးကျောင်းသူ တစ်ယောက်ကို ပိုးပန်းမယ်ဆိုပြီး လေထဲမှာ တိုက်အိမ်ဆောက်ထား စိတ်ကူးနဲ့ ရူးခဲ့တာပေါ့ဗျာ။
တကယ်တမ်း ကျောင်းတွေ ဖွင့်တော့ ကျွန်တော်တို့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေက ရန်ကုန်မြို့ပြင်မှာ.. ကျွန်တော်တို့ တက်ခဲ့ရတဲ့ကျောင်းက လှိုင်သာယာ ထိန်ပင်သုသာန် မျက်စောင်ထိုးမှာ။ ဆေးကျောင်းက မြို့လည်မှာဆိုတော့ စိတ်ကြီးကိုမှ ညစ်ရပါတော့တယ်။ ဆေးကျောင်းသူကို ပိုးပန်းဖို့ မပြောနဲ့ ကိုယ့်ကျောင်းကို နေ့စဉ်ရောက်ဖို့ကို မနည်းကြိုးစားယူရတယ်။ အင်း... သောင်းပြောင်းထွေလာ ဆိုတာ အဲဒီတော့မှ သိရတော့တယ်။ ကျောင်းတွေကို မြို့ပြင်အထိ သောင်းသောင်း ပြောင်းပေးလိုက်လို့ မနက် မနက်... ကျောင်းဖယ်ရီအမှီ စောစောစီးစီး အိပ်ရာထရတာ အပြင် အဝေးကြီးသွားရတော့ ကျောင်းလဲရောက်ရော လူက အတော်လေးကို ထွေနေပြီ။ မောင့်ဆေးကျောင်းသူက အသည်းကို ဓါးနဲ့ခွဲဖို့ အခွင့်အရေးကို... မှားပါတယ် ကိုသောင်းကြီးက မညှာမတာ မစာမနာ လုယူသွားတယ်လေ။ ချိုမြိန်တဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကို နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းကြီးထဲမှာ လှိုင်သာယာလယ်ကွင်းတွေကို ဖြတ်ပြီး တရကြမ်း တိုက်လာတဲ့ လေနီကြမ်းတွေက ဖုံးအုပ်သွားတော့ပါတယ်ဗျာ။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မောင့်ဆေးကျောင်းသူလေးလည်း မျှော်တော်ရောင်ဘ၀နဲ့ပဲ...
Posted by JulyDream at 8:26 PM 11 comments:
Posted by JulyDream at 6:45 PM2comments:
3/ om;tdrfwGif; oaE¨wm;ypönf;xnfUNcif; (Intrauterine Device -IUD)
om;tdrfwGif;xnf ypönf;[m b,folawGtwGuf oifhawmfovJ¿
uav;arG;zl;wJh trsdK;orD;awG[m uav;vHk;0 rarG;zl;olawGxuf oifhawmfygw,f/ uav;rarG;zl;wJh trsdK;orD;awGrSm xnfhzdkU tenf;i,fcufcJwwfvdkUyg/
a[mfrkef;aq;rsm;oHk;zdkU roifhawmfwJh trsdK;orD;rsm; (txl;oNzifh touf 35 ESpfausmf? aq;vdyfaomufol trsdK;orD;rsm;? t0vGefol trsdK;orD;rsm;? aoG;aMumydwf? aoG;cJ a&m*g&Sdol trsdK;orD;rsm;? tonf;a&m*g&Sdol trsdK;orD;rsm;? &ifom;uifqm Nzpfzl;olrsm;)
vdifrSwqifh ul;pufwwfwJh a&m*g&Sdolrsm;/
wifyqHkydkif; ydk;0ifwJha&m*g (Pelvic Inflammatory Disease) NzpfaewJh? 'grSr[kwf a&m*gjzpfNyD; aysmufcgp trsdK;orD;rsm;/
aMu;eD"mwf rwnfhwJh trsdK;orD;rsm;/
om;tdrfxJ ypönf;xnfhzdkU qHk;NzwfvdkufNyDqdk&if bmawGodxm;zdkUrvJ¿
&moDvmNyD;5&ufrS 1 ywftwGif; xnhfEkdif&if taumif;qHk;jzpfygw,f/ rD;zGm;NyD;cgp trsdK;orD;awG twGufawmh rD;zGm;NyD;4ywftMumrSm xnfh&ygr,f/ rdcifEdkU wpfrsdK;wnf; wkdufauR;aewJh trsdK;orD;awGtwGufawmh rD;zGm;NyD; 6v tMumrS xnfhvdkU&ygw,f/ wjcm;udk,f0efwm;enf;awGeJU rwlbJ xl;jcm;csufuawmh ypönf;xnfhNyD;wJh tcsdefupNyD; wNcm;tumtuG,f oHk;aep&m rvdkawmhwmygyJ/
ypönf;xnfhwJhtcgrSm jyif;jyif;xefxef emusifvSw,f r[kwfayr,fh tenf;i,fawmh udkufcJwm? atmifhwmrsdK; &Sdwwfygw,f/ emwwfwJh trsdK;orD;awGqdk&if yg&mpDwarmvdk taysmhpm; temoufomaq;wrsdK; MudKaomufxm;vdkU &ygw,f/
ta&;MuD;wmu ypönf;xnfhNyD;NyD;csif; ukwifay:u rqif;cifrSm xnfhay;wJh q&m0ef? 'grSr[kwf olemNyK q&mru om;tdrfxJxnfhvdkufwJh ypönf;&JUatmufrSmygwJh MudK;pudk prf;wwfzdkU oifay;ygvdrfhr,f/ um,uH&Sif trsdK;orD;twGuf ta&;tMuD;qHk;u 'DMudK;pudk aocsm prf;wwfzdkUygyJ/ ypönf;[m om;tdrfxJrSm ae&mwus jzpfaeraeudk trsdK;orD;u tNrJppfaq;aezdkU vdktyfvkdU Nzpfygw,f/
ypönf;xnhfNyD;NyD;csif;? 'grSr[kwf ypönf;xnfhNyD; &ufydkif;twGif; atmifhwm? emwm eJU aoG;qif;wmawG &Sdwwfygw,f/ 3v uae 6v txdawmif Mumwwfygw,f/ okawoeawGrSm aMu;eDypönf; xnfholawG[m a[mfrkef;ypönf;xnfholawGxuf aoG;qif;rsm;rI? &moDaoG; rrSefrIawG ydkrsm;w,fvkdU ajymxm;ygw,f/
ypönf;xnfhNyD; 1 v odkUr[kwf6ywf tMumrSm jyefppfaq;zdkU &ufcsdef;ay;ygvdrfhr,f/ e,fa0;rSmaewJh trsdK;orD;awGtzdkU MudK;pudk aocsmprf;MunfhNyD; ae&mwus &Sdae&if aq;&Hkaq;cef; jyefroGm;EkdifvJ tpdk;&drfvGefzdkU rvdkygbl;/
MudK;pudk prf;vdkU rrdawmhbl;? 'grSr[kwf ypönf;&JU rmwJh udk,fxnfydkif;udk om;tdrfacgif;0rSm prf;rdaew,f qdk&ifawmh q&m0efqD csufcsif; jyefoGm;&rSm NzpfNyD; roGm;Ekdifao;bl; qdk&ifvnf; wjcm;tumtuG,f wpfckckudk oHk;xm;zdkU vdkygvdrfhr,f/
0rf;Akdufatmufydkif;eJU wifyqHkydkif;awGrSm emw,f? vdifqufqHwJh tcgawGrSm emw,f? yHkrSefr[kwfbJ rdef;rudk,fxJu t&nfqif;wm? aoG;qif;wmawG rsm;vmw,f? csrf;wkefNyD; zsm;w,f? ysdKUw,f? tefw,f qdk&ifawmh q&m0efqD csufcsif;oGm;oifhygw,f/ om;tdrfeJU rsdK;yGm;t*Fgvrf;aMumif;rSm ydk;0ifrSmudk pkd;&drf&vkdUyg/ ydk;0ifEIef; ydkjrifhw,f rjrifhbl; qdkwJh tcsuf[mvnf; okawoejyKaeolcsif; tjiif;yGm;aewJh tcsufNzpfayr,fh trsm;pkuawmh ydk;0ifEkdifrI ydkrsm;w,fvdkU vufcHxm;ygw,f/
trsdK;orD;[m udk,f0ef&Sdaew,fvkdU rdrdukd,fudk oHo, &Sdw,fqdk&ifvnf; q&m0efqD csufcsif;oGm;oifhygw,f/ trSefwu,fudk udk,f0ef&oGm;w,fqdk&ifvnf; ypönf;udk csufcsif; xkwfvkdufr,fqdk&if vaphwJhtxd jyóem r&SdbJ uav;udk arG;vdkU&ygw,f/ ypönf;aMumifh uav;rSm udk,fvuft*Fg cRwf,Gif;wmrsdK;vnf; rNzpfwwfygbl;/
om;tdrfwGif;xnfh ypönf;oHk;wJh trsdK;orD;awG[m udk,f0ef&EkdifEIef; enf;oGm;vdkU omrmef trsdK;orD;awGxuf ae&mr[kwfbJ oaE¨wnfwJh tufwdk;ypfudk,f0ef &oGm;EkdifEIef;[m enf;w,f qdkayr,fh ypönf;oHk;pGJaepOf &vmwJh udk,f0efawG[m omrmefudk,f0efawGxuf tufwdk;ypfjzpfEkdifEIef; ydkrsm;ygw,f/ 'gaMumifh 'Denf;eJU udk,f0efwm;xm;wJh trsdK;orD;awG 0rf;Adkufatmufydkif;w0dkuf emvmw,f qkd&ifawmh tufwdk;ypfukd,f0efudk owdxm;&rSm jzpfvkdU q&m0efqD csufcsif;oGm;oifhygw,f/
ysrf;rQtm;jzifh a[mfrkef;ygwJh ypönf;awGudk om;tdrfxJrSm5ESpftxd xm;vdkU &NyD;? aMu;eDygwJh ypönf;awGudkawmh 10 ESpfcefUtxd om;tdrfxJ xnfhxm;vdkU&ygw,f/ oHk;pGJwJh trsdK;orD;twGuf owdxm;&rSmuawmh jyefxkwf&r,fh tcsdefrSm rarhravsmhbJ jyefxkwfzdkU Nzpfygw,f/
jzpfzdkU cJ,Of;vSayr,fh om;tdrfeH&HaygufNyD; ypönf;[m udk,fwGif; a&mufoGm;wmrsdK; &Sdwwfygw,f/ 'gayr,fh jzpfawmifjzpfcJyg? tvGef &Sm;ygw,f/
ypönf;xkwfvdkufNyD; aemuf 1 ESpftMumrSm oHk;pGJol trsdK;orD; 90% [m udk,f0ef jyef&Ekdifygw,f/ 'gaMumifh NrHKoGm;wwfw,fqdkwm rrSefygbl;/
aMu;eDygwJh om;tdrfwGif;xnfh ypönf;awGudk ta&;ay: udk,f0efwm;enf; (Emergency contraception) taeeJUvnf; toHk;NyKvdkU &ygw,f/ tumtuG,f r,lbJ vdifqufqHrdNyD;5&uftwGif; rSm xnfhvdkufEkdifw,fqdk&if udk,f0efr&atmif umuG,fay;Ekdifygw,f/ wNcm; ta&;ay: udk,f0efwm;enf;awGudkawmh aemufrS xyfwifay;ygr,f/
Posted by JulyDream at 6:19 PM 1 comment:
&kwfw&uf Munfhvdkuf&if urf;ajcrSm aumufxm;wJh c&kav;awG wef;pDxm;w,f xif&ygw,f/ wu,fawmh acwftqufquf oHk;cJhwJh om;tdrfwGif;xnfh oaE¨wm;ypönf;av;awGyg/
om;tdrfwGif;xnfh ypönf;awGrSm t"dutm;Nzifh a[mfrkef;ygwJh om;tdrfwGif;xnfh ypönf;rsm;eJU aMu;eDygwJh om;tdrfwGif;xnfh ypönf;rsm; qdkNyD;2rsdK;cGJvdkU&ygw,f/ 'gaMumifhvnf; a[mfrkef;oHk;pGJNyD; oaE¨wm;Ncif; &JU aemufqHk;taeeJU om;tdrfwGif;xnfh ypönf;awGvnf; rygrNzpf yg&wmyg/
tckacwfrSm toHk;trsm;qHk; om;tdrfwGif;xnfh ypönf;yHkpHuawmh t*Fvdyf tu©&m T yHko@mef &SdwJh ypönf;awGyg/
a[mfrkef;ygaom om;tdrfwGif;xnfh ypönf;rsm;
om;tdrfwGif;xnfh ypönf;csif; wlayr,fh tay:yHkrSmygwJh Mirena odkUr[kwf LNg-IUD vdkU vlodrsm;wJh a[mfrkef;ygwJh ypönf;eJU atmufrSmyHkNyxm;wJh Copper T vdkU trsm;odMuwJh aMu;eDygwJh om;tdrfwGif;xnfh ypönf;awG[m tmedoif oufa&mufyHkcsif; enf;enf;yJ uGJMuygw,f/ Mirena rSmygwJh a[mfrkef;uawmh aomufaq;awGrSm tcgcg ygvmzl;wJh y&dk*sufpwdk*sif a[mfrkef; yJNzpfygw,f/ a[mfrkef;&JU tmedoifaMumifh om;tdrfacgif;u xGufwJhtcRJudk ydkyspfap;apNyD; okufaumif Nzwfoef;zdkU cufcJapygw,f/ rrsdK;ONyGef vrf;aMumif;wavQmufxGufwJh t&nfudkvnf; aNymif;oGm;apvdkU okufaumifNzwfoGm;zdkU rvG,fatmif vkyfay;ygw,f/ a[mfrkef;&JU tmedoifaMumifh oHk;pGJol trsdK;orD;rSmvnf; &moDvmwJh yrmP enf;oGm;wm? &moD vHk;0 rvmawmhwmawG &Sdwwfygw,f/ aemufqHk;taeeJUawmh 'Dvdk wm;qD;xm;wJhMum;u rsdK;OoaE¨atmifoGm;cJh&ifawmif om;tdrfxJrSm obm0r[kwfwJh ypönf;wpfck &SdaewmaMumifh &ufydkif;om &Sdao;wJh oaE¨om;avmif;[m om;tdrfrSm ruyfwG,fEkdifbJ (trsdK;orD;udk,fwkdifawmif rodvdkufbJ) udk,f0efysufus oGm;Ekdifygw,f/
aMu;eD"mwfygaom om;tdrfwGif;xnfh ypönf;rsm;
yHkrSm Nrif&wJh twkdif;yJ aMu;eDygwJh om;tdrfwGif;xnfh ypönf;awGrSm T yHko@mef&JU vufwH awGrSma&m atmufaNcwkdifay:rSmyg aMu;eDuGif;Nym;awG ygygw,f/ a[mfrkef;oHk;pGJzdkU roifhawmfwJh trsdK;orD;awG twGuftoifhawmfqHk; NzpfNyD; aMu;eD"mwf (Copper) eJU rwnfhwJh olawGawmh vHk;0a&SmifMuOf oifhygw,f/
aMu;eD&JUtmedoifaMumifh okufaumifawG&JU vIyf&Sm;rIudk aES;auG;apwJhtNyif? okufaumifawG udkvnf; aoapEdkifygw,f/ 'gaMumifh rrsdK;ONyGefxJudk okufaumifa&mufoGm;Ekdifacs tawmfudk enf;oGm;NyD; a&mufoGm;cJhjyef&ifvnf; tay:rSmvdkyJ om;tdrfxJrSm obm0r[kwfwJh t&mwpfck &SdaevdkU oaE¨rwnfEkdifygbl;/
Posted by JulyDream at 5:51 PM No comments:
ဆားချက်တယ် ဆားချက်တယ်... ဆိုပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နောက်ပြောင်ကျီစယ်တာတွေကို ဘလော့လောကမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အကြံကုန် ဂဠုန်ဆားချက်ဆိုတာနဲ့ ခိုင်းနှို်င်းပြောဆိုတာမျိုးပေါ့။ ရေးစရာ ဘာမှမရှိတော့လို့ အကြံထုတ်လို့မရတော့လို့ သူများရေးထားတာတွေကို ယူသုံးတာမျိုးကို ဆားချက်တယ်လို့ သုံးနှုန်းကျတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အကြံကုန် ဂဠုန်ဆားချက် ဇာတ်လမ်းကတော့ သိပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါ။ မသိသေးရင်လည်း အကျဉ်းချုပ် ရေးပြပါမယ်။ တခါတုန်းက ဂဠုန်တစ်ကောင်က နဂါးတစ်ကောင်ကို တွေ့လို့ အစာရပြီဆိုပြီး လိုက်ပါတော့တယ်။ နဂါးလည်း ဂဠုန်ကို မြင်တော့ တချိုးတည်း ပြေးတော့တာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ကုန်သည်တစ်စုကို တွေ့လိုက်ရတဲ့ နဂါးက လူယောင်ဖန်ဆင်းပြီး အဲဒီကုန်သည်တွေကြားမှာ ရောယောင်လိုက်ပါပြီး ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ပါလေရော။ နဂါး ကိုယ်ယောင် ဖျောက်သွားတာကို သိလိုက်တဲ့ ဂဠုန်ကလည်း လူယောင်ဖန်ဆင်းပြီး ကုန်သည်တွေနောက်ကို လိုက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ကုန်သည်တွေက ပင်လယ်ကမ်းစပ်နား ရောက်လာပါလေရော။ နဂါးလည်း ချက်ချင်း ပင်လယ်ထဲကို ဒိုင်ဗင်ထိုး ပြေးပါလေရော။ ဂဠုန်အနေနဲ့ မြင်လိုက်ပေါ့မယ့် အချိန်မမှီလိုက်ဘူးပေါ့။ အဲဒါနဲ့ နဂါးပြန်လာ မလားဆိုပြီး စောင့်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်း စောင့်လို့ကလည်း မဖြစ်တော့ ဆားချက်သမား အသွင်ဖန်ဆင်းပြီး စောင့်နေတော့တာပေါ့။ အချိန်တွေသာ တဖြည်းဖြည်းကုန်သွားတယ် ကိုရွှေနဂါးက ပြန်မပေါ်မလာပါဘူး။ အဲဒီလိုနဲ့ ဂဠုန်လည်း အသက်သာကြီးပြီး သေသွားရရှာတယ် နဂါးကိုတော့ ထပ်မတွေ့လိုက်ရဘူး။ ဇာတ်လမ်းလေးက အဲဒါလေးပါပဲ ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့်ဘလော့မှာလည်း ဆားချက်တာတွေ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရည်ရွယ်ချက်တွေက မတူနိုင်ပါဘူး။ တကယ်တော့ ကျွန်တော့်က ဖိုရမ်မာပါ။ ပုဂံဖိုရမ်ကတည်းက ဖိုရမ်ရေးနေတဲ့ မန်ဘာတစ်ဦးပါ။ ၂၀၀၃ ကတည်းက ဖိုရမ်ရေးနေတာ အခုဆို ဖိုရမ်သက်တမ်း ၄ နှစ် ရှိပါပြီ။ နောက်ပိုင်း ပုဂံဖိုရမ် ပျက်သုဉ်းသွားတော့ နေးတစ်မြန်မာ ဖိုရမ်မှာ ရေးပါတယ်။ အခုချိန်အထိ နေးတစ်မြန်မာမှာ ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘလော့ရေးတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၇ ဇူလိုင် ၇ မှာ ခုနစ်သုံးလုံးဆုံတဲ့ အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ ဒီဇူလိုင်အိမ်မက် ဘလော့လေးကို ဖန်တီးမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ ဘလော့သက်တမ်း အလွန်နုပါသေးတယ်။
အဲဒီလို ဖိုရမ်မှာ ရေးထားတာတွေထဲက ဘလော့ဖတ်တဲ့သူတွေပါ ဖတ်စေချင်တာတွေကို ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ ကူးယူဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါ ဆားချက်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် တကယ့်စေတနာက အားလုံးကို ဝေမျှပေးချင်တာပါပဲ။ တကယ်တော့ ဘလော့ဖတ်သူတိုင်း ဖိုရမ်ဖတ်တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကျွန်တော့်ဘလော့က ပါစင်နယ် ခံစားချက်တွေ ရေးသားတာထက်စာရင် အများသိသင့်တဲ့အချက်တွေကို ရေးလေ့တင်လေ့ရှိတာကို သတိထားမိကြမှာပါ။ ကျွန်တော့် ဘလော့ကနေ ပြန်သွားရတဲ့လူတွေအဖို့ တစုံတရာသော အတိုင်းအတာအထိ အကျိုးရှိသွားစေချင်တယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဇူလိုင် ဆားချက်ခြင်းက ဘလော့ကို လာရောက် လည်ပတ်သူတွေအတွက် အကျိုးမမဲ့နိုင်ပါဘူး ဗဟုသုတ တိုးပွါးစေပါတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကဲ... ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆားချက်ကြပါစို့...
Posted by JulyDream at 6:36 PM2comments:
"ဗမာ အောက်တန်းစား" ကျွန်တော် ကြားနေရတာ နည်းနည်း အကြိမ်ရေများလာပြီဗျ။ ပထမ ကြားစတုန်းကတော့ အီလည်လည်နဲ့ ခံစားရတယ်။ ဘယ်သူတွေ ပြောကြတာလဲဆိုတော့ လူမျိုးခြားတွေနဲ့ ရေပေါ်ဆီတိုင်းရင်းသားအချို့ တွေဆီကဗျ။
တွေးမိတာလေးရယ်ပါ... အရင်တုန်းက ဗမာမိသားစု တစ်ခုမှာ သူစိမ်း မိန်းကလေး ယောက်ျားလေး အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ပါဝင် ပူးပေါင်းလာမယ်ဆိုရင်တောင် ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာခြင်းတူနေဦးတော့ သူက ဘာလူမျိုးမို့ ဘာတိုင်းရင်းသားမို့ဆိုပြီး ဂျီးဂျွတ်များခဲ့တဲ့လူမျိုးပဲဟာ။
စီးပွားရေးများဆိုရင် ဗမာအသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးနဲ့ လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတွေ အထင်ကရ ရှိခဲ့ကြရဘူးတာပါ။ ခုများကျတော့မှာ ဟိုက ဒီက ကြားလာရတာ ပြည်တွင်းနေ လူမျိူးခြားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေကတောင် ဗမာဆိုရင် သူတို့လူမျိုးနဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးဖို့မပြောနဲ့ သူတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေ တွေ့လာရပါတယ်။
ငွေကြေးချမ်းသာမှုနဲ့တင် မဟုတ်ပါဘူး၊ အခွင့်အရေးရမှုနဲ့ လူရိုသေ ရှင်ရိုသေဖြစ်နေတဲ့ နေထိုင်မှု အဆင့်အတန်းကောပေါ့ အဲဒါတွေကို တောင်ရောက်မြောက်ရောက် ထည့်စဉ်းစားကြည့်ပြီး လူတွေကို အဆင့်ခွဲကြည့်တော့ ဒီလိုတွေ့ရသဗျ။
ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိ အရာရှိကြီးများ၊ ၄င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပါမစ်ရ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကြီးများ၊ သစ်၊ ရေနံ၊ ကျောက်မျက်သယံဇာတနှင့် ပါတ်သက်သောလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်များ...
(အရေအတွက်အားဖြင့် တစ်သိန်းလျှင် တစ်ယောက်ခန့်နှုန်း)
ဗိုလ်မှုးအဆင့်ရှိ အရာရှိကြီးများ၊ ၄င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အခွင့်အရေးရ တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များ၊ လူမျိုးခြားများဦးဆောင်သော လုပ်ငန်းကြီးများ၊ အခွင့်အရေးကောင်းသော ရာထူးကြီး အစိုးရ၀န်ထမ်းများ...
ဗိုလ် အဆင့်ရှိ အရာထမ်းများ၊ ၄င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များများ၊ အဆက်အသွယ်ကောင်းသော ကုန်သည်ပွဲစားကြီးများ၊ အကြီးစားကုန်ထုပ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်များ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ ရာထူးကြီး ၀န်ထမ်းများ၊ အသေးစား ဖက်စပ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ၊ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များ...
အလတ်စား ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ၊ ရာထူးကြီး ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ သာမာန် ကုန်သည် ပွဲစားများ၊ လယ်ယာမြေပိုင်ရှင်ကြီးများ၊ ရာထူးကြီး အစိုးရရုံးဝန်ထမ်းများ၊ အကျိုးတော်ဆောင်များ၊ နာမည်ရ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်၊ စက်မှုလက်မှု ပညာရှင်နှင့် အနုပညာရှင်များ...
(စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ဆယ်ပုံ တစ်ပုံခန့်ရှိ)
ဘာသာရေး အကြီးအကဲများ၊ ရာထူးငယ် တပ်မတော်သားများ၊ သာမာန်လခစား ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ အခြေခံလစာရ အစိုးရရုံး ၀န်ထမ်းများ၊ တနိုင်တပိုင် လယ်ယာမြေ ပိုင်ရှင်များ၊ တနိုင်တပိုင် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအသေးစား ပိုင်ရှင်များ၊ သာမာန် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်၊ စက်မှုလက်မှု ပညာရှင်နှင့် အနုပညာရှင်များ...
တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စား အလုပ်သမားများ၊ ပျံကျ အလုပ်သမားများ၊ အရင်းချို့တဲ့သော လုပ်ငန်းငယ်များ၊ သာမာန်မြို့ပြကျေးလက်နေ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၊ လယ်ယာအငှား ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးရေးသမားများ၊ အခြေခံ ၀န်ဆောင်မှု အလုပ်သမားများ၊ ပညာတတ် အလုပ်လက်မဲ့များ...
(အခြေအနေအရကြောင့် ဖြစ်သည်၊ နှိမ်ချလိုခြင်းမဟုတ်)
အရူးများ၊ သူတောင်းစားများ၊ ဒုစရိုက်သမားများ၊ တေပေလေလွင့်သူများ...
( အမှတ် ၁၊ ၂ နှင့် ထပ်တူဖြစ်သည်)
အဲလိုအဲလို တွက်လိုက်ပြန်တော့လဲ ဗမာဆိုတာ အောက်တန်းစားအဆင့်ထဲမှာ အားလုံးနီးနီး ပါနေတာ တွေ့ရတော့ သိပ်မအံ့သြတော့ဘူးပေါ့ဗျာ... ပြော ပဒေါပေါ့ဗျာ... ဟဲဟဲ
မှတ်ချက်။ ။ နေးတစ်မြန်မာဖိုရမ်မှာ ကိုသခင်ကြီး ရေးထားတဲ့ပို့စ်ပါ။ တွေးစရာ အတွေးလေးတွေ ပါတဲ့အတွက် သူ့ဆီက ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံယူပြီး ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အခုလို တင်ပေးရတာကလည်း လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခဖြစ်စေလိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒ အနည်းငယ်မျှ မပါရှိကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့ အခြေအနေအမှန်ကို တင်ပြချင်လို့ တင်ဆက်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted by JulyDream at 4:59 PM 15 comments:
မနေ့က သင်တန်း တက်စရာရှိတော့ မနက် ၈ နာရီလောက် အိပ်ရာထလိုက်တယ်။ အိမ်ကနေ ၉ နာရီ လောက်မှာ ထွက်လာခဲ့တယ်။ သင်တန်းက ၁၀ နာရီမှ စမှာ ဆိုတော့ အချိန်မှီပါတယ်။ စင်္ကာပူကြက်ခြေနီရုံးကို ၉ နာရီ လေးဆယ်မိနစ်လောက်မှာ ရောက်သွားတယ်။ ကင်မရာ ယူသွားတော့ အပေါ်ထပ် မတက်ခင် ကြက်ခြေနီ အဆောက်အဦးကို ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်လို့ပေါ့။ သင်တန်းခန်းမထဲ ရောက်တော့ အမည်စာရင်း ပေးရတယ်။ အမည်မှာ စာလုံးပေါင်းမှားနေလို့ ပြန်ပြင်ခိုင်းရသေးတယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ လက်စွဲစာအုပ်တွေ ယူရင်း ခုံတစ်ခုမှာ ထိုင်နေလိုက်တယ်။ ခန်းမထဲမှာတော့ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေက ပြပွဲလေးတွေ ခင်းကျင်းထားပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက သွေးလှူရှင်စုဆောင်းတာ ကိုင်တဲ့ မန်နေဂျာနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ သူနဲ့ စကားစမြည် ပြောနေဖြစ်လိုက်တယ်။ သူက သူတို့ကြက်ခြေနီတွေ သွေးလှူရှင် စုဆောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ရှင်းပြတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော် လုပ်ဖူးတာတွေ ပြောပြတာပေါ့။ အသက်တွေ ဘာတွေ မေးတော့ ဖြေလိုက်တော့ ငယ်သေးတာပဲတဲ့။ အဲဒါ တကယ်ကို သူပြောတာနော်။ ညာဘူး အဟဲ...။ အဲဒါနဲ့ Youth Donor Camp ၀င်ဖို့ အချိန်ပေးနိုင်မလား ဆိုပြီး မေးလာပါလေရော။ ဘယ်နေ့တွေလဲ မေးကြည့်တော့ ဒီနှစ်အကုန်ဖြစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ကနေ ၃၀ အထိပါ။ ရုံးမှာလည်း စုထားတဲ့ ခွင့်ရက်တွေက ရှိတော့ ၀င်မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒီက ကြက်ခြေနီတွေ ဘယ်လို စခန်းသွင်းလည်း သိချင်တာကိုးဗျ။
နောက် သင်တန်း အစီအစဉ်တွေ စပါတယ်။ စစချင်း ခုံလုတဲ့ ကစားနဲ့ ကစားပြီး စိတ်တင်းကြပ်မှုတွေကို ဖြေဖျောက်ပေးပါတယ်။ ခုံမရလိုက်တဲ့သူက ကိုယ့်ကိုကိုယ် မိတ်ဆက်ရတာပေါ့။ ဒီကစားနည်းတွေက ယူနီဆက်ပွဲတွေမှာ ကစားနေကြဆိုတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အခက်အခဲ မရှိပါဘူး။ အမြဲတမ်း အလှည့်တိုင်း ခုံရနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ခုံအမြဲရနေလို့ ထိုင်နေရင် ကိုယ်အကြောင်း သူတို့သိမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုဘူး ခုံမရအောင် ဆော့လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ စကာင်္ပူကြက်ခြေနီတွေကြားမှာ မြန်မာကြက်ခြေနီ တစ်ဦးအနေနဲ့ အပီအပင် မိတ်ဆက် ကြွားခွင့်ရတော့ပါတယ်။ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့တယ် ညာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။
ကစားနည်းလေး ပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်း စကာင်္ပူကြက်ခြေနီအကြောင်း ရှင်းပြတာတွေ လုပ်တာပေါ့။ ကြက်ခြေနီ သမိုင်းကြောင်း၊ အခြေခံမူ ခုနစ်ချက်တွေကို ရှင်းပြပါတယ်။ ပြီးတော့ စကာင်္ပူ ကြက်ခြေနီရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို တစ်ခုချင်း ရှင်းပြပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေကို ကိုင်တွယ်နေတဲ့ မန်နေဂျာတွေနဲ့လည်း မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာ လုပ်ငန်းတွေမှာ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ပြောပြီး နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။ ကြက်ခြေနီကဒ်တွေကိုတော့ စာတိုက်နေ ပို့ပေးမှာလည်း ဗော်လန်တီယာ စုဆောင်းတဲ့ဌာနက နောက်ဆက်တွဲ ရှင်းပြပါတယ်။
အစားအသောက်နဲ့ ဧည့်ခံထားတာတွေကို စားသောက်ရင်း ပြခန်းထဲမှာ လှည့်လည်ကြည့်ကြပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဆိုင်ရာမန်နေဂျာတွေက ရှုင်းပြကြပါတယ်။ အချိန်ပေး စကား လက်ခံပြောပေးကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သွေးလှူရှင် စုဆောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်ဖို့ နဂိုကတည်းက စာရင်းပေးထားတော့ အဲဒီလုပ်ငန်းမှာ အလိုအလျှောက် စာရင်းဝင်ပြီးသားပါ။ အဲဒါနဲ့ အခြား ကြက်ခြေနီလုပ်ငန်းတွေကို လိုက်လံ စပ်စုပါတော့တယ်။
ရှေးဦးပြုစုခြင်း သင်တန်းဌာနက မန်နေဂျာက လာမိတ်ဆက်ပြီး သူ့ဌာနမှာ နည်းပြဆရာအဖြစ် လုပ်ပေးစေချင်တယ်ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က မြန်မာပြည်မှာ ကြက်ခြေနီ သင်တန်းတွေ ပေးဖူးကြောင်း မိတ်ဆက်တုန်းက ပြောခဲ့တာကို သူက မှတ်ထားပြီး အခုလို လာပြောတာပါ။ ကျွန်တော်က မြန်မာပြည်မှာ ဗမာလိုပဲ သင်ရတဲ့အတွက် အဆင်ပြေကြောင်းပေါ့။ ဒီမှာ အင်္ဂလိပ်လို သင်ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် အဆင်ပြေမယ်လို့ မထင်သေးကြောင်း ရှင်းပြတော့ သူက အဲဒါတွေအတွက် မပူပါနဲ့ပေါ့။ သူတို့အနေနဲ့ နည်းပြသင်တန်းတွေ ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေနိုင်ကြောင်း ဘာသာစကား အခက်အခဲက အလိုလို အဆင်ပြေသွားနိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ စကာင်္ပူကြက်ခြေနီ နည်းပြအဖြစ် ပါဝင်လှုပ်ရှားဖို့ စာရင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ သြော်... ဘာလိုလိုနဲ့ စကာင်္ပူမှာ နည်းပြ ဖြစ်အုံးမှာပေါ့။
ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ချင်တာတွေ ရှိပေမယ့် အလုပ်တစ်ဘက်နဲ့ဆိုတော့ စစချင်းနှစ်မှာ အများကြီး စာရင်းမပေးရဲပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုက ဆေးတပ်ဖွဲ့ပါ။ အဲဒီအဖွဲ့က ယူနီဖောင်းဝတ်ရတဲ့ အဖွဲ့ပါ။ ရာထူးတံဆိပ်တွေ တပ်ဆင်ရပါတယ်။ ပွဲလမ်းသဘင် အခမ်းအနားတွေမှာ First Aid Cover ဆေးအကူအညီ ပေးရတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပေးရပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက် ၂၀၀၉ နှစ်ကျမှပဲ အဲဒီအဖွဲ့မှာ ပါဝင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားလိုက်ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ပြန်ဖို့ အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာပြီး ဟိုဟိုဒီဒီ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ပါတယ်။ ခဏကြတော့ င်္ကညျွိငျေငညါ ရံပုံငွေရှာဖွေတဲ့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် မန်နေဂျာက အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာပြီး လာမိတ်ဆက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ စကားစမြည် ပြောဖြစ်ပါတယ်။ သူက ကျွန်တော်ကို မြန်မာပြည်မှာ ကြက်ခြေနီလုပ်သက် ဒီလောက်ကြာခဲ့တဲ့အတွက် အတွေ့အကြုံရှိသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ကူညီပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့လုပ်ငန်းတွေမှာ ကျွန်တော် ပါဝင်နိုင်မယ့် လုပ်ငန်းအနေအထားတွေ ရှင်းပြပါတယ်။ စာရင်းပေးဖို့ တိုက်တွန်းလွန်း အားကြီးတာနဲ့ ရံပုံငွေ ရှာဖွေရေးမှာလည်း လုပ်အားပေးဖို့ စာရင်းပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။
သွေးလှူရှင် ရှာဖွေစုဆောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းရယ်... ရှေးဦးပြုစုခြင်း သင်တန်း နည်းပြဆရာအဖြစ် ပါဝင်မှာရယ်... ရံပုံငွေရှာဖွေတဲ့အဖွဲ့မှာ လုပ်အားပေးတစ်ယောက် အနေနဲ့ရယ်... စကာင်္ပူကြက်ခြေနီအဖွဲ့အစည်းမှာ ၂၀၀၈ တစ်နှစ်မှာတော့ ပါဝင်လှုပ်ရှားရတော့မှာပေါ့။ မနေ့က ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုး မှတ်တိုင်လေးတစ်ခုပေါ့။
Posted by JulyDream at 9:26 PM 11 comments:
r*¾Zif; zwf&if; xGef;tdjE´mAdk&JU uav;av; tom;0gwJh taMumif;uae qufpyfjyD; a&;csifwm av;awG a&;vdkufygw,f/
abbDav;awG arG;uif;prSm tom;0gwwfw,f qdkwm vlwdkif;rodwJh t&mwpfckvdkU xifygw,f/ tJhvdk tom;0gw,fqdkwm vlUb0&JU yHkrSefjzpf&dk;jzpfpOfwpfckvdkU vufcHEdkifzdkU[m ydkjyD;awmif cufcJygw,f/ 'gayr,fh wu,fudkyJ... arG;uif;p uav;wdkif;eD;yg; tom;0gMuwm[m yHkrSefygyJ/ obm0w&m;&JU zefwD;rIwpfckygyJ/
t&ifacwfwkef;u r0gygbl;... tckacwfrS qef;vmwmvdkU rxifygeJU/ t&ifwkef;u 0grSef; r0grSef; rodcJhwm jzpfEdkifygw,f/ tcktcsdefxd wcsdKUawGvnf; 0gvdkU 0gaerSef; rodbJ jyD;oGm;wmawG &Sdygw,f/
tJh'Dvdk tom;0g&jcif; taMumif;udk odyÜHenf;us ajz&Sif;csufawG tcdkiftrm&Sdygw,f/ qdkawmh rdbawG taeeJU odxm;&rSmu tom;0gwdkif; aMumufzdkU rvdkygbl;/ 'gayr,fh aMumufp&maumif;wJh tom;0gwmawG &Sdygw,f/ tJh'gawGudk A[kokw&Sdxm;rS wu,f&ifqdkif&wJhtcg rSefuefwJh qHk;jzwfcsufudk csEdkifrSm jzpfygw,f/
uav;av;wpfa,muf 0gwl;wl;av; jzpfaewm b,frdbrS pdwfrcsrf;omEdkifygbl;/ q&m0efu rpdk;&drf&bl; ajymvnf; &ifxJu tyleJU vufcHEdkifrSm r[kwfygbl;/ jrefrmyDyD ab;u 0dkif;jyD; pmzwfr,fholawGvnf; trsm;MuD;awGU&ygOD;r,f/ udk,fudk,fwdkifurS xdkufoifhwJh A[kokw r&Sdxm;&if ywf0ef;usif ya,m*eJU vkyfrdvkyf&m pGwfvkyf&if... uav;udk wu,fcspf&m ra&mufbJ jzpfygvdrfhr,f/
tckydkUpfrSmawmh arG;umpuav;awG tom;0gwJh taMumif;udk ajymjzpfatmif ajymawmhr,f/ arG;ump3&ufuae5&uftwGif;rSm uav;tom;av;awGu pjyD;0gvmwwfygw,f/ r0gwJh uav;awGvnf; &Sdygw,f/ 'gayr,fh 0gwmu trsm;pkvdkU qdkMuygw,f/ tom;0gw,fqkdwm ul;wwfwm r[kwfygbl;/ b,faq;&HkrSm arG;&ifjzifh tom;awG0gvdkU&,fqdkjyD; a&SmifMuwJholawG &Sdwm Mum;zl;vdkUyg/
rdbawG taeeJUu bmudk tMurf;zsif; odxm;zdkUvdkwmvJ qdk&if uav;tom;0gwmeJU ... [m 0gjyD 0gjyD qdkjyD; jyL;wl;jyJwJ rjzpfzdkUu t"duyg/ uav;rSm 'DrdbyJ tm;udk;ae&wm rdbu jymaejyDqdk&if uav;twGuf qHk;jzwfcsuf cufygw,f/ q&m0efuvnf; rdbudk ajym&qdk& cufygw,f/ rvdktyfbJ &IyfaxG;wmawG jzpfwmayghaemf... taru idkvdkuf tazu bmvkyfvdkUvkyf&rSef; rodvdkuf/
tom;0gwm aMumufp&m raumif;bl;vm;qdkawmh aMumufp&m aumif;wmawG &Sdygw,f/ uav;&JU OD;aESmufudk xdcdkufwJhtxd tom;0gwmawG toufqHk;&HI;wm txd jzpfwJh[mawG &Sdygw,f/ tJhvdk tpGef;2zuf &Sdaeawmh rdbawG taeeJU ylwmvnf; rrSm;vSbl;aygh/ 'gayr,hf yloifhwJh tcsdefrS ylwm aumif;ygw,f/
Oyrm... uav;u csufroefUvdkU ydk;0ifjyD; 0gwm/ tifrwefqdk;ygw,f/ tJh'grsdK; rjzpfatmifu tapmMuD;xJu umuG,fvdkU &ygw,f/ csufjzwfjyD;wJh usefwmav;udk oefUatmifxm;zdkUygyJ/ bmrS r0ifap&ygbl;/ q&m0efawGu uav;csufudk bmrS ruvdbJ xm;wmu t&ufjyef qGwfwmxufawmifrS csufjrefjrefa<uapw,fvdkU ajymMuygw,f/ uav;av; xGufvmjyDqdk tJh'Dcsufudkvnf; 0dkif;jyD; uvdcsifvdkufMuwmqdkwm... vlawGrsm; cufygw,f/
aemufjyD; uav;rSm aoG;eJU ywfoufwJh a&m*g&Sd&if... taztar&JU aoG;tkyfpk rwl&if pojzifh 0gwwfygao;w,f/ tJh'guawmh q&m0ef&JU tydkif;rdkUvdkU olu &Sif;jyygvdrfhr,f/ bmjzpfvdkU tom;0gvdkU bmvkyf&r,f bmnm bmnm.../ tckydkUpfu &dk;&dk; yHkrSef 0gaeus taMumif;udkyJ OD;wnfjyD; ajymcsifwmrdkUvdkU... a&m*gawG taMumif; a&;raeawmhygbl;/
aemuf xl;qef;wJh tcsufwpfck ajymygOD;r,f/ tJh'guawmh EdkUwdkufwJhuav;awGrSm ydkjyD; tom;0gw,fqdkwmygyJ/ tJh'D taMumif;udk EdkUwdkufauR;a&; tm;ay;wJh awmhypfatmufrSm ra&;oifhbl;vdkU xifygw,f/ 'gayr,fh 'g[m rajymbJxm;xm;vdkU vlawmfawmfrsm;rsm; rodMubl;vdkU ,lqygw,f/
EdkUwdkufwJh uav;rSm tom;0gwm jzpfwwfygw,f/ aemufawmh jyefaumif;oGm;wwfygw,f/ wcsdKUu rdcifEdkUudk cP jzwfay;&ovdkd rjzwfbJeJU jyefaumif;wmvnf; &Sdygw,f/ (EdkUrIefUawG a&mif;aumif;wmvnf; rajymeJU)
yHkrSeftom;0gjcif;[m uav;udk jyify a&m*gtcsdKUu umuG,fay;wJh pGrf;tif&Sdw,fvdkU tckaemufydkif;rSm ,lqvmMuygw,f/ cdkifvHkwJh taxmuftxm;awGawmh &SmaeqJygyJ/
rdbawG taeeJU vkyf&rSmuawmh uav;arG;jyD;&if csufudk oefUatmifxm;zdkU&,f? uav; rSdef;wm EdkUpdkUenf;wmqdk&if q&m0efudk csufcsif;ajymzdkU&,f? rpdk;&drf&wJh yHkrSeftom;0gjcif;rsdK;rSm tylawG rvGefuJzdkU&,f t"duyg/
tom;0gwJh uav;awGrSm rD;acsmif;jyjyD; t0gavsmhatmif vkyfMuygw,f/ rD;acsmif;tvif;awG rsufpdxJ r0ifatmif owdxm;&ygr,f/ uav;u rD;tylaMumifh a&"mwfqHk;&HI;wwfvdkU EdkUydkwdkuf&ygr,f/ arG;arG;csif;upjyD; EdkUwdkufcJh&if uav;0gwJh tcsdefrSm EdkUaumif;aumif;vdkufaejyDrdkU uav;twGuf vHkavmufygw,f/ uav;pdkUav EdkUxGufavrdkU ravmufri jzpfrSm ylp&m rvdkygbl;/ taru a&? t&nf rsm;rsm; aomufay;&if ydkaumif;ygw,f/
twdkcsKyf oabmrsdK;a&;xm;vdkU rjynfhpHkwmawG jznfhpGufay;apcsifygw,f/ tawGUtBuHKrsm; &SdcJh&ifvnf; aqG;aEG;Mu&atmifyg/
Posted by JulyDream at 10:51 AM3comments:
pmtkyfxJu[mawG vmzwfjyawmhr,fvdkUawmh rxifygeJUOD;/ pdwfxJ&SdwmawG t&ifa&;rSmyg/ usefcJhwJh tcsufawG&Sd&if ajymay;Muyg/
rdcifEdkUwdkufauR;jcif;aMumifh rdcifjzpfolrSm tusdK;aus;Zl;awG trsm;MuD;&Sdygw,f/
eHygwf(1)u tvkyf&Iyf oufomygw,f/ tvkyf r&Iyfbl;vdkU ajymwmawmh r[kwfbl;aygh/ EdkUAl;wdkufovdk EdkUudk azsmf& tyltat;prf;&? Al; aq;&? Al;npfywfvdkU uav;wpfckckjzpf&if yl&yif&... tJhvdkrsdK; Am[D&awG enf;oGm;wmudk ajymwmyg/
EdkUwdkufr,fh araru EdkUwdkufcgeD; vufaq;zdkUawmh vdkygw,f/ jyD;awmh EdkU0ifatmif wdkufwwf oGm;&ifawmh tvkyfr&Iyfawmhbl;aygh/ EdkUr0if wpfcsuf 0ifwpfcsufqdk&if tvkyf&Iyfygw,f/ tJhvdkawG rjzpfatmif pepfwus ... uav;udk EdkUaocsmwyfjyD; wdkuf&ygr,f/
EdkUwdkufr,fqdk&if uav; EdkUwyfwwfzdkUu ta&;MuD;wJh tykdif;rSmygygw,f/ pp csif;rSm uav;twGuf awmfawmfcufcJwJh tvkyfwpfckvdk jzpfaejyD; tar twGufvnf; pdwfr&Snfcsifp&m jzpfygw,f/ 'gu uav;eJUrdcif2udk,fMum;ta&;qdkawmh olwdkUcsif;ndSrS tqifajyrSmyg/
enf;vrf;uawmh uav;EIwfcrf;eJU EdkUoD;tzsm;eJU xdjyD; uav; yg;pyf [ vmatmif vkyf&ygr,f/ tJh'Dvdk yg;pyf [ vmjyDqdk&if uav;&JU acgif;udk xdef;xm;wJhvufu uav;udk tarbuf qGJuyfvdkuf&ygr,f/ wpfcgr& aemufwpfcgaygh/ tJhvdkeJU txmusoGm;ygvdrfhr,f/ Key uawmh taru uav;bufudk wdk;&rSm r[kwfbJ uav;udk tarbufudk qGJuyf&rSm jzpfygw,f/ EdkUwyfwm rSefoGm;&if odomygw,f/ jyefawmif jzKwfvdkUr&awmhbl; jzpfoGm;r,f/ trJ0dkif;av;u uav;yg;pyfxJrSm tjynfh&SdaejyD; uav;&JU atmufEIwfcrf;av;u vefvefav; jzpfae&if tdkaujyDaygh/ jyefjzKwfcsif&if uav;yg;pyf axmihfpGef;av;uae uyfjyD; vufoef;av; xdk;vdkuf&if azmuf qdkwJhtoHav;eJU EdkUwyfxm;wm jyKwfoGm;rSm jzpfygw,f/
uav;u EdkUaumif;aumif;qGJwwfjyDqdk&if tartaeeJU vG,fultqifajy oufomygw,f/ tpydkif;rSm cufrvdkeJU aemuf a&&SnfrSm awmfawmfododomom tqifajyygvdrfhr,f/ (Oyrm- ntdyfae&if; uav;EdkUqmjyDqdk tdyfae&if; wdkufvdkUvnf; &ygw,f/ xjyD; EdkUazsmf& EkdUaET;&awG vkyf&wmxuf oufomwmaygh/ a&&Snfusawmh tdyfa&;ysufwJh 'Pfuqdk;ygw,f/ uav;udk wjcm;oleJUxm;jyD; EdkUAl;azsmf wdkufyapvdkU xm;EdkifwJholqdk&ifawmh bmrS rajymvdkyg/)
aemuf tvkyf&Iyf oufomwJh aemufwpfydkif;uawmh &moDjyefray:wmyJ jzpfygw,f/ wcsdKUqdk EdkUjzwfvdkufawmhrSyJ &moDjyefvmwwfwmqdkawmh tJh'DtwGuf tcsdefray;&awmhbl;aygh/
om;qufjcm;apw,f qdkwmuawmh 100% r[kwfvdkU odyfjyD; tus,fw0ifh ajymraeawmhygbl;/
eHygwf(2)u rdcifEdkUudk yHkrSefwdkufjcif;tm;jzifh EdkUwif;wmudk umuG,fay;&m a&mufygao;w,f/ EdkUwif;wmuae udk,fylwuf zsm;... wcsdKUqdk temawGbmawGjzpfwJh txd Zmwfvrf;&IyfwwfvdkU apmapmpD;pD; umuG,fwmyJ aumif;ygw,f/
eHygwf(3) t"du umuG,fwJh tcsufuawmh &ifom;uifqm jzpfEIef;enf;oGm;ygw,fwJh/ &ifom;uifqmqdkwm uav;udk EdkUrwdkufwJh rdef;rawGudk bk&m;ocifu 'PfcwfwJh a&m*gvdkUawmif ajymprSwfjyKMuw,f/ 'gaMumifh rdcifEdkUwdkufauR;jcif;[m tarrSmvnf; tzdk;wefwJh tusdK;jzpfxGef;apygw,f/
eHygwf(4) p&dwfpu tukeftusenf;apw,fvdkU ajym&if csrf;omwJh todkif;t0dkif;uawmh &Dwmaygh &DwmayghvdkU jyefajymrSmayghaemf/ EdkUAl;wdkufvdkU b,favmufukefrvJ.... EdkUAl;zdk; EdkUrIefUzdk; EdkUAl;aq;wJh t&nfzdk; bmzdk; nmzdk; ukefyap ukefyapvdkU ay;EdkifwJholawG twGuf.... p&dwfpuudk rpOf;pm;ayr,fh... tukefrcHEdkifolawG twGuf tawmfav; wm oGm;wJht&m jzpfygw,f/
'ghtjyif EdkUAl;aMumifh jzpfvmr,fh jyoemawG twGuf aq;&Hkaq;cef; q&m0efzdk;awGyg acRwm&ma&mufw,fvdkU ajymvdkU &ygao;w,f/
eHygwf(5) rdcifu wpfom;arG;wpfaoG;vS qdkovdk ydkvSvmygvdrfhr,f/ wpfom;arG; wpfaoG;0awGuawmh rdcifEdkUrwdkufbJ aeMuwJholawG rsm;ygw,f/ udk,f0efaqmifpOfu wtdtdwufvmwJh ukd,ftav;csdefu uav;EdkUwdkufcsdefrSm wwdwdeJU jyefuswmrdkUvdkU.... 'Dtcsufudkawmh rdcifawG rodrjzpfr&Sd&avatmif vufqifhurf;zdkU vdkygw,f/ EdkUrdkU uav;arG;jyD; 0dwfwufvmwmeJU ... tJh'D 0dwfu 'Dwdkif;jyefuszdkU awmfawmfudk cufwmyg/ wu,fqdk wpfcsufckwf ESpfcsufjywf uav;udk EdkUwdkuf&if;eJU pvif;abmf'Dav;udk jyeft&,lvdkuf&HkygyJ/
eHygwf(6) uav;u tarudk ydkjyD;wG,fwmygw,f/ uav;yJ.. tarudkwG,fwm rqef;bl;vdkU ... tJhvdkawmh r[kwfygbl;/ arG;uif;p uav;[m b,foltarvJqdkwm EdkUb,folwdkufvJqdkjyD; rSwfxm;wmjzpfvdkUyg/
b,folawG bmajymajym bmvkyfvkyf rdcifEdkUwdkufwJh uav;u tcsdefwef&if rdcifqDrydkUvdkUudk r&bl;/ qdkawmh tartaeeJU tJh'DtcsdefrSm todkif;t0dkif;rSm q&mMuD; ygyJ/ b,folrS acsmhvdkUr&atmif EdkUqmvdkU idkwJhuav;av;u udk,fh&ifcGifxJa&mufrS csdKpdkU&if; jidrfoGm;wJh t&om... rdcifb0&JU tESpfygyJ/
uJ... uav;udk EdkUwdkufauR;EdkifwJh rdcifjzpf&wm *kPf,lp&mwpfckyg/
Posted by JulyDream at 9:09 PM2comments:
မနေ့က မိုးလင်း အိပ်ရာထတော့ အတော်လေး နောက်ကျနေပြီ။ အဲဒါနဲ့ အမြန်ရေမိုးချိုး အ၀တ်စားလဲပြီး ဘူတာကို ပြေးရတော့တာပေါ့။ ရုံးနောက်ကျမယ်ဆိုတာ သေချာနေသလောက် ဖြစ်နေတော့လည်း စိတ်ကတော့ အေးဆေးပါပဲ။ ရထားကတော့ ရုံးချိန်လွတ်နေလို့ ချောင်ချိနေတာပဲ။ ထိုင်စရာ နေရာတွေ ဘာတွေရလို့ပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ရုံးကို ၁၀ နာရီကျော်မှာ လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ ရှိတာ ရထားချောင်လို့ ထင်တယ်ဆိုပြီး မဆီမဆိုင် တွေးမိသေးလေရဲ့။
ရုံးရောက်တော့ လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်ပေါ့။ ၁ နာရီလောက် ကြာတော့ ဗိုက်ဆာတာနဲ့ ကော်ဖီဖျော်ပြီး မုန့်စားဖို့ လုပ်လိုက်တယ်။ ကော်ဖီသောက်ရင်း မစစ်တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အခြားအီးမေးလ်တွေ ဘာတွေ စစ်ကြည့်တော့ စကာင်္ပူကြက်ခြေနီက သင်တန်းတက်ဖို့ ဖိတ်ထားတဲ့ စာဝင်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ စကာင်္ပူကြက်ခြေနီရဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားဖို့ လျှောက်ထားတာ ၁၀ လ ပိုင်းကတည်းကပါ။ ခေါ်နိုးခေါ်နိုးနဲ့ မျှော်လိုက်ရတာ ကြာလှပေါ့။ ကြားထဲမှာ ဖုန်းနဲ့တစ်ခါ အရင်က လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ လူမှုရေးအကြောင်းတွေကို အင်တာဗျူး လုပ်လိုက်သေးတယ်။ နောက်ဘာမှ သတင်းမကြားတာနဲ့ မခေါ်တော့ဘူးတောင် ထင်နေတယ်။ အီးမေးလ် စစ်လိုက်မှပဲ ဒီအပတ် စနေနေ့မှာ သင်တန်းတက်ဖို့ ခေါ်ထားမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ သူတို့ အီးမေးလ် ပို့ထားတာ ၁၁ လအကုန်လောက် ကတည်းက ပို့ထားတာ။ အဲဒါနဲ့ ကြက်ခြေနီအဖြစ် လက်ခံတာကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ သင်တန်းကို လာခဲ့မယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း အီးမေးလ်ပြန်လိုက်တယ်။
သင်တန်းတက်ပြီးရင် Mobile Blood Drive လုပ်ငန်းတွေမှာ အချိန်ပေးနိုင်သလောက် တက်တက်ကြွကြွ လုပ်အားပေးလိုက်အုံးမယ်။ ပြီးရင်ဒီက ကြက်ခြေနီတွေ ဘယ်လိုဘယ်နည်းနဲ့ လုပ်ကြတယ်ဆိုတာ မှတ်ထားပြီး မြန်မာပြည်မှာ သုံးလို့ရမယ့်ဟာတွေကို ပြန်သုံးခိုင်းမယ်လို့ စိတ်ကူးမိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလို လက်ခုပ်တီးရမယ့် ယောင်ခြောက်ဆယ် ပွဲတွေတော့ မရှိလောက်ပါဘူး။ ဟိုဟာမလုပ်ရဘူး ဒီဟာမလုပ်ရဘူး... ကန့်သတ်ထားပြီး အကယ်လို့များ လုပ်ချင်ရင် အများကောင်းမှုဆိုပြီး သူကြီးအမည်တပ်မယ့် အလုပ်မျိုးတွေလည်း မရှိလောက်ပါဘူး ထင်ရတာပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြက်ခြေနီ အခြေခံမူ ၇-ချက်ထဲက Universalityဆိုတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ပျံ့နှံ့မှုဆိုတာမှာ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် ဖြစ်ခွင့်ရတာကိုပဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ တကယ်ကို ပျော်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
နေ့လည်ကျတော့ အလုပ်က မန်နေဂျာကြီးက Notebook တစ်လုံး လာပေးတယ်။ အိမ်မှာ သုံးလို့ရအောင်တဲ့။ နောက်ပိုင်း ကာစတာမာတွေဆီ သွားရရင် ကွန်ပျူတာ ရှိသင့်တယ်ဆိုပြီး အခုဒီကွန်ပျူတာကို ခဏသုံးထားပါတဲ့။ နောက်မှ နောက်ထပ် အသစ်တစ်လုံးနဲ့ ပြန်လဲပေးမယ်ဆိုပြီး ပြောသွားလေရဲ့။ အဲဒါနဲ့ IBM Thinkpad တစ်လုံးကို မျောက်အုန်းသီး ရသလို ဟိုဟိုဒီဒီ ကလိနေလိုက်တယ်။ လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ ထည့်၊ ဖိုင်တွေ ပြန်ကူးပေါ့ဗျာ။ အမှန်ကတော့ အိမ်မှာ အလုပ်ခိုင်း လိုက်တာပါပဲ။ သိတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်က ရုံးဆင်းချိန် ၅ နာရီခွဲ ဒေါင်ခနဲ ဆိုတာနဲ့ ကွန်ပျူတာ ပိတ်ပြီး ဖယ်ရီရှိရာကို အရောက်သွားနေတာ ဆိုတော့ အိုတီ မလုပ်လို့ ကြည့်မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ထင်ပဗျာ။ အဲဒါကြောင့် ရုံးဆင်းချိန်တွေ ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ အိမ်ကနေ အလုပ် လှမ်းလုပ်လို့ရအောင် ကွန်ပျူတာ ပေးလိုက်တာပါ။
အဲဒီလိုနဲ့ ရုံးဆင်းပါလေရော။ တနေခင်းလုံး ရွာနေတဲ့မိုးက ရုံးဆင်းချိန်ထိ မိုးက မစဲသေးပါဘူး။ ကွန်ပျူတာအိတ် အလေးကြီးကို လွယ်ထားရတဲ့နေ့မှာ မိုးကရွာတော့ သွားရတာ ကသီပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ရုံးကားကလည်း မစောင့်ပဲ ထွက်သွားပါလေရော။ အဲဒါနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူတွေ ဘူတာရုံကို ချီတက်ရတာပေါ့။ ရုံးကားနဲ့ဆို အခန်သင့်လေး လိုက်သွားရုံပဲလေ။ အခုတော့ အိတ်ထမ်းထားရပြီး ရထားပေါ်မှာ လူကျပ်ညှပ်ပြီး မတ်တပ်ရပ် လိုက်လာရတာ အတော်လေးကို အီစလံဝေသွားတယ်ဗျာ။ အိမ်ရောက်တော့ အိမ်အလုပ်တွေလုပ်၊ ချက်ပြုတ်စားသောက်ပြီး ကွန်ပျူတာလေးဖွင့် အလုပ်လုပ်ပေါ့။ အရင်လို အေးဆေးနေလို့ ရမယ့်ဘ၀တွေ သိပ်မရှိတော့ဘူးဗျာ။ ညဉ့်နက်ပိုင်းအထိ အလုပ်တွေလုပ်... နောက် အနွေးထည်ဝတ်ပြီး အိပ်ရာဝင်လိုက်တယ်။ ညပိုင်းမှာလည်း မိုးတွေရွာနေတော့ ချမ်းစိမ့်စိမ့်နဲ့ အိပ်ရတာ အိပ်လို့ ကောင်းမှ ကောင်းဗျာ။ အိပ်မက်လှလှတောင် မက်လိုက်သေးတယ်။
Posted by JulyDream at 10:51 PM 1 comment:
Labels: Living in SG, Red Cross, Straw
'DydkUpfawGu trSefawmh rdcifEdkU&nf&JU wefzdk;udk rQa0ay;csifwJh oabmav;yg/ rdcifwpfa,muftaeeJU om;orD;udk rdcifEdkUwdkufauR;zdkU b,favmufta&;ygw,fqdkwm ajymcsifwmyg/ Exclusive Breast Feeding &JUtusdK;aus;Zl;awG... wu,fvkyfr,fqdk&if awGUBuHK&r,fh tcuftcJawG ... b,fvdk &ifqdkifajz&Sif;rvJ qdkwmawG... wifjycsifwmyg/
rdcifEdkUwdkufauR;wm aumif;rSef; vlwdkif;odMuayr,fh rwdkufjzpfwJh taMumif;awGu &Sdaeygw,f/ tJh'DtwGuf epfemr,fqdk&if uav;awG epfemjyD; tem*wfrSm vlrsdK;wpfrsdK;vHk; epfemrSm jzpfygw,f/
jyD;awmh vlawGu rdcifEdkUwdkufyg bmnmeJU aMumfjimae&if tvum;ygvdkU xifMuw,f/ EdkUrIefUbl;awGavmuf aMumfjimraumif;vdkU xifygw,f/ csrf;omwJholawG rajymeJU qif;&JjyD; pm;p&mr&SdwJh rdef;rwpfa,muf olUuav;udk &&mtrIefY 0,fwdkufwm awGUzl;w,f/ tJh'D uGrf;,mqdkifu qefrIefUu olUuav;twGuf ydkaumif;r,fxifvdkU olu tiwfcHjyD; 0,fwdkufwmyg/
rdbwdkif;taeeJU udk,fhuav;udk,f EdkUrIefUwdkufwdkuf qefrIefUwdkufwdkuf rdcifEdkUwdkufwdkuf BudKufwm wdkufcGifh&Sdygw,f/ vGwfvyfpGm a&G;cs,fcGifh&Sdygw,f/ 'gayr,hf tJhvdka&G;cs,fzdkU A[kokw &Sdapcsifygw,f/
tck jrefrmvlrIywf0ef;usifrSm uav;wpfa,muf arG;jyDqdk tarvkyfolrSm [kdvlajymwm vkyf& 'Dvlajymwmvkyf&... aumif;Edk;Edk;eJU ... olrsm;a,mifvdkU a,mif&wm csnf;ygyJ/ taz vkyfoltaeeJUvnf; oifhwifhwJh A[kokw&SdjyD; rdb2a,muf wdkifwdkifyifyifeJU qHk;jzwf&r,f/ ywf0ef;usifu tMuHay;wmawGudkvnf; pOf;pm;jyD;rS qHk;jzwf&r,f/
ab;ya,m*u awmfawmfqdk;ygw,f/ a&S;vlMuD;awGuvnf; rvG,fbl;/ acwfvli,fawGuvnf; rvG,fbl;/ ynmenf;enf;wwfwJh tzGJUuvnf; rvG,fbl;/ a&SYrSm uav;arG;jyD;om; vlawGuvnf; rvG,fbl;/
tckrS arG;vmwJh uav;udk apwem xm;ygw,f... igajymvdkufrS 'Duav; aumif;pm; &Smr,fqdkjyD; apwemawGydkjyD;... 0dkif; r MuawmhwmygyJ/ uav;rSm a&qdkvnf; aomuf& oMum;&nfqdkvnf; aomuf& EdkUrIefUqdkvnf; aomuf&... trsdK;rsdK; uvdawmhwmygyJ/
taz tarawGu uav;aumif;usdK; twGuf bmtaumif;qHk;vJ... bmawG vkyf&rvJqdkjyD; odxm;oifhovdk... ab;em;u tMuHay;wJholawGrSmvnf; wm0ef&Sdygw,f/ vkyfcsifrSef; rod rvkyfcsifrSef;od... twif; zdtm;ay;jyD; vkyfcdkif;wmrsdK; rjzpfoifhyg/ wu,fvdkU rsufpda&SUrSm tJhvdk zdtm;ay;aewm awGU&ifvnf; uefUuGufvdkU&&if uefUuGufay;oifhygw,f/ rnfolrqdkaygh/
Oyrm... arG;p uav;udk ysm;&nfwkdkuf&r,f.. arG;arG;csif; a&wdkuf&r,f... pojzifh wpfa,mufa,mufu nTefMum;ae&if... olu bmtaxmuftxm;&SdvdkUvJ... b,favmuf odvdkUvJvdkU awG;Munfhyg/ olUywf0ef;usif olukd,fwkdifygrS uav;awG awGUzl;vS 20 30 aygh/ olUuav;a&m olvkyfwmyJvm;/ olUuav;xuf ydkaumif;wJh t&m r&apcsifvdkU wdkufwGef;aewmvm;/ olU apwem b,favmufrSefrvJ/ olU todua&m b,favmuf rSefrvJ/ (uav;twGuf ajymaewmxufudk olq&m0ifvkyfcsifvdkU ajymaewmvdkUyJ jrifrdygw,f/)
tm;emvdkU pGwfvkyfp&m rvdkygbl;/ udk,fhom;orD; ta&;/ olrsm;ajymwdkif; avQmufvkyfzdkU arG;xkwfxm;wm r[kwfygbl;/
'DydkUpfawG[m tay:rSm ajymcJhovdk rdcifwpfa,mufxJeJU qdkifwm r[kwfygbl;/ rdcifwpfa,muf&JU a&G;cs,fcGifhudk yHhydk;ay;zdkU ol&JU ywf0ef;usifeJUvnf; qdkifygw,f/
EkdUwdkufcsifwJh rdcifudk EdkUwdkufcGifh&atmif... EdkUwdkuf&ifvnf; tqifajyatmif... ulnDay;&rSmyg/ EdkUrIefUwdkufcsif&ifvnf; enf;pepfrSefatmifwdkufzdkU ulnDay;&ygr,f/ wcsdKU rdcifawGrSmu tvkyfu wpfbufeJUrdkU bmnmwdkU &Sdygw,f/
EdkUrxGufvdkUqdkwmawmh... rsm;aomtm;jzifh... rrSefygbl;/ EdkUrxGufbl;qdkwm[m uav;u EdkUudk aocsmpdkUraebl;qdkwJh oabm oufa&mufygw,f/ EdkUqdkwm uav;pdkUav ydkxGufavavyJrdkU EdkUxGufapcsif&if uav;udk rsm;rsm;ay;pdkU&rSmyJ jzpfygw,f/ tJh'DrSm tcuftcJawG &Sdygw,f/ uav;u EdkUwyfwm rrSef&if... taru emvGef;jyD;... qufrwdkufEdkifwmawG &Sdygw,f/ ppcsif;qdk EdkUuvnf; pdkUwJh'PfaMumifh emwm bmnmeJU tar vkyfolrSm awmfawmf cH&ygw,f/
wu,fawmhav EdkUrIefUbl;rSm a&;xm;wmawGu rdcifEdkUrSmygwJh[mawGudk vdkufwkjyD; teD;pyfqHk;wlatmif azmfpyfay;xm;wmjzpfygw,f/ obm0twdkif; EdkU&nf*vif;awGu azmfpyfwmxuf ydkaumif;atmif vkyfEdkifvdrfhr,fvdkU rxifrdygbl;/ ydkraumif;blqdkwJh oufaovnf; &Sdygw,f/
wpfck &Sdao;w,f/ EdkUrIefU&JU t&omu uav;ydkMudKufatmif csdKcsdKav; vkyfxm;w,fwJh/ tJ'Dvdk qdkawmh uav;u EdkUrIefUwpfcg wdkufjyD;&if tarEdkUudk odyfaumif;w,f rxifawmhbl;aygh/ jyD;awmh EdkUrIefUu Al;eJUwdkuf&if... uav;qDudk a[mueJ a[mueJ 0ifoGm;wmqdkawmh... uav;u tarEdkUpdkUwmavmuf tyifyef;rcH&bl;aygh/ tJhawmh2ck,SOfvdkuf&if uav;u EdkUAl;bufudk tm;omoGm;ygw,f/ bmrS rodwJh uav;udk enf;ynmeJU vSnhfpm;wmygyJ/
Posted by JulyDream at 12:10 AM2comments:
'DykdUpfawGrSmawmh owif;pmawGxJuvdk wdkif;jynfawG vlrsdK;awGudkcspf&JUvm;vdkU ajymovdkrsdK; avmuftxd rqdkvdkygbl;/ uav;awGudk wu,fcspf&JUvm;vdkU ar;csifwm jzpfygw,f/
vlUavmuxJudk uav;av;wpfa,muf w0g;0g;idk&if; a&mufvmjyDqdkygawmh/ uav;&JU arar azaz eJUwuG wpfrsdK;vHk; wpfaqGvHk; aysmfMuyg;Mu BudKqdkMuw,fayghav/ aq;&HkMuD;awGrSm arG;wmqdkawmh q&m0ef q&mrawGvnf; pHkpHknDnDaygh/
abbDav;ukd arG;jyD;jyD;csif; em&D0uftwGif;rSm rdcifEdkUwdkufauR;zdkU vdkygw,f/ 'gu awmfawmf rsm;rsm; odwJhudpö jzpfygw,f/ 'gayr,fh tenf;pkyJodwJh vQdKU0Sufcsufuawmh rdcifEdkUwdkufw,fqdkwm ajymoavmuf rvG,fbl;qdkwmygyJ/
ararjzpfvmjyDqdk&if abbDav;AdkufqmrSmawmh pdk;&drfwMuD;eJU jzpfaerSmyJaygh/ tJhawmh EdkUwdkufygjyDwJh/ arG;jyD;jyD;csif; ppxGufwJh EdkUudk EdkUOD;&nfvdkU ac:ygw,f/ EdkUOD;&nfqdkwm MunfMunfav; (EdkUtppfu jzLjzLMuD;av) jyD;awmh enf;enf;av;yJ xGufygw,f/ enf;ayr,fh uav;twGufawmh taumif;qHk;vdkU ajymvdkU&ygw,f/ tJh'DxJrSm a&m*gumuG,fEdkifwJh ypönf;awG udk,fcHtm;aumif;apwJh ypönf;awG trsm;MuD;ygygw,f/ abbDav;taeeJU vufvGwfrcHoifhwJh t&mawGjzpfvdkU araru MudK;pm;&ygr,f/ pdwf&Snf&ygr,f/
Mum;od&oavmuf uav;awmfawmfrsm;rsm;[m EdkUOD;&nfudk tjynfht0 r&Muygbl;/
jyoemtrsm;pku b,fvdkjzpfwmvJqdkawmh araru EdkUOD;&nf&JUxGufEIef;u aES;aewmukd tm;rvdk tm;r&jzpfygvdrfhr,f/ uav;rS EdkU0 yghrvm;/ EdkUuvnf; rxGufbl;qdkjyD; pdwfylrdygvdrfhr,f/ tJh'DrSm uav;udk wjcm;[mawG (EkdUrIefU? tcsdK&nf) pwmawG wdkufcsifovdkvdk jzpfvmygvdrfhr,f/ jyD;awmh tar wpfa,mufxJ&JU qHk;jzwfcsufeJU rjyD;ygbl;/ ab;vlawGuvnf; tm;ay;tm;ajrSmuf vkyfMuygOD;r,f/
uav;uvnf; EdkUpdkUwm txmrusao;/ EdkUuvnf; xGufwmenf;/ pdwfuvnf;yl ab;vlawGuvnf; ajrSmufay;... (r,Hkr&SdygeJU wcgwav q&m0ef q&mrawGyg MuH&mygjzpfygao;w,f) ... tJh'geJUyJ abbDav;udk wjcm;t&nfawG wdkufygw,f/ trsm;pkaom uav;q&m0efawGu abbDav;udk tJhvdkwdkufwmudk jyif;jyif;xefxef qefUusifMuayr,fh tvpfrSm cdk;wdkufygw,f/ uav;idkaewmudk yg;pyfydwfatmif pyg,f&S,femhpfawGu cdk;wdkufwmrsdK;vnf; &Sdygw,f/
tJh'Dvdkwdkufvdkufawmh bmjzpfoGm;vJ/ AdkufxJrSm tMumMuD; tm;awGpkvmwJh abbDav;u awmf&Hk ab;tEÅ&m,favmufudk umuG,fEdkifwJh twGuf qdk;qdk;0g;0g; jzpfcsifrS jzpfygvdrfhfr,f/ tJh'gaMumifhvnf; 'Dvdkvkyf&yfawGu oufqdk;&Snfaewm jzpfygw,f/
'gayr,fh tJhvdkt&nfawG rwdkuf&if ydkaumif;w,fqdkwmu t"durdkUvdkU uav;udk wu,fcspfwJh azaz arar qdk&ifawmh 'Dvdkvkyf&yfawGudk uefUuGufoifhygw,f/ bmvkdUvJ qdk&if... abbDav;&JU Adkufao;ao;av;xJudk 10 pDpD EdkU0ifzdkU[m5pDpDt&nfwpfrsdK; 0ifoGm;jyDqdk&if wefzdk;&SdwJhEdkU t0ifenf;oGm;ygr,f/ uav;u AdkufjynfhoGm;awmh EdkUudk MudK;pm;pdkUrSm r[kwfygbl;/ EdkUqdkwm pdkUav rsm;rsm;xGufav.... rpdkUav rxGufav jzpfvdkU.... EdkUxGufu enf;ae&muae ydkenf;zdkU Zmwfvrf;jzpfvmygvdrfhr,f/ EdkUtjzL[m yHkrSefqdk3&ufavmufrSm xGufvm&rSm... aemufusygvdrfhr,f/ txGufaES;ygvdrfhr,f/
jrefrmt,l &Sdygao;w,f/ EdkUOD;&nfudk nSpfypfjyD; EdkUtjzLxGufvmawmhrS wdkufwm/ b,favmuf ESajrmzdkUaumif;vJqdkwm..../ vHk;0 uefUuGufygw,f/
abbDav;udk wu,fcspfMuwJholawG bmvkyf&rvJqdkawmh....
EdkUwdkufzdkU bmawG jyifqif&rvJqdkwm uav;rarG;cifxJu avhvmxm;oifhygw,f/ tJh'Dvdk avhvmwJhae&mrSm pdwfcs,HkMunf&wJh ae&mawGu tcsufawGudk pkaqmif;zdkUvkdygw,f/ tdrfem;u ta':MuD;u 'DvkdyJ ajymvdkUwdkU bmwdkU...
acwfynmwwf rdbawGtaeeJU &dk;&dk;yJ pOf;pm;Munfh&if odygw,f/ urÇmay:rSm EdkUwdkufowå0gawG trsm;MuD;&Sdwm... taumifaygufav;awG[m EdkUOD;&nfudk aomufjyD; MuD;vmMuwmrdkUvdkU.... vlaygufpav;udkvnf; EdkUOD;&nfyJ tjynfht0 wdkufoifhygw,f/
EdkUOD;&nfrSm yg0ifwJh ypnf;awGudkvnf; aocsm "mwfcGJprf;oyfjyD;vdkU uav;twGuf 100% tusdK;&SdwJh t&mqdkwm vufcHEdkifp&m&Sdygw,f/
araru abbDav;udk wu,fcspfw,fqdk&if ywf0ef;usif ab;ya,m*awGudk jzwfausmfjyD; arG;jyD; em&D0uftwGif; rdcifEdkUOD;&nfudk pdwf&Snfvuf&Snf wdkufauR;oifhygaMumif;eJU ywf0ef;usif todkif;t0dkif;rsm; taeeJUvnf; rSefuefwJh tm;ay;rIudkyJ vkyfoifhygaMumif;....
Posted by JulyDream at 11:57 PM No comments:
မနေ့က အလုပ်နေ့တစ်ဝက်ပဲ လုပ်ရမယ့်နေ့ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း တစ်နေကုန် ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ဖြစ်နေတယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ အတူနေ အိပ်ခန်းဖော် ညီငယ်တစ်ဦးက မြန်မာပြည်ကို ပြန်သွားဖို့ မနက်စောစောကတည်းက လေယာဉ်ကွင်းကို ဆင်းသွားပြီဆိုတော့ အခန်းကြီးက လွတ်နေတယ်။ ဒီမှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ကျောင်းတစ်ခုကို လာတတ်ပေမယ့် အလုပ်အကိုင် မရှာနိုင်တာကြောင့် မြန်မာပြည် ပြန်သွားရတာ။ ဘာသာစကား အခက်အခဲကြောင့်လည်း သူ အလုပ်မရတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတာက ခရီးသွားတွေနားဝင် သဘောပေါက်အောင် ပြောရဆိုရတာမျိုးလေ။
ရေမိုးချိုး အ၀တ်စားလဲပြီးတော့ အိမ်မှာအတူနေတဲ့ ဗိသုကာအကိုနဲ့ ရုံးမသွားခင် အိမ်အောက်ကဆိုင်မှာ တိုရှည်စားပြီး ကော်ဖီ သောက်လိုက်သေးတယ်။ ပြီးတော့ သူ့မိန်းမ ထိုင်ဝမ်ကနေ ပို့ထားတဲ့ မှတ်ပုံတင်စာကို စာတိုက်မှာ သွားရွေးတာကို အဖေါ်လိုက် သွားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နှစ်ယောက်စလုံး အနီလိုင်းကနေ ရထားစီးပြီး ရုံးကို ထွက်လာကြလိုက်တယ်။ သူ့အလုပ်က ကလီမန်တီးဘက်မှာဆိုတော့ ဂျူရောင်းအထိ ရထားစီးရတာ အတူတူပဲလေ။
အခုလမှာ အတော်လေးကို အလုပ်တွေ ပိနေတယ်။ လစာမတိုးဘဲ ရာထူးတိုးပေးပြီး အလုပ်တွေ ဖိခိုင်းထားလို့ အသည်းအသန် လုပ်နေရတယ်။ အရင်ကလို ယောင်ခြောက်ဆယ် လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ ရုံးရောက်တော့ လုပ်စရာ အလုပ်တွေကို တဆင့်ပြီး တဆင့် သတိထား လုပ်နေရတယ်။ စက်ရုံတစ်ခုရဲ့ ဂိုထောင်အတွက် တနလာင်္နေ့မှာ ဆော့ဝဲလ်ဒီမို ပြဖို့ရှိတာကို ပြင်ဆင်နေရတာပါ။ တစ်ခုမှားသွားရင် လုပ်ငန်းပိုင်း အစီအစဉ်တွေ လွဲချော်နိုင်တာမို့ တစ်ခုချင်းကို သေချာ လုပ်နေရတယ်။ လုပ်လိုက် ပြန်စမ်းလိုက်နဲ့ နေ့လည့် ထမင်းစာဖို့တောင် အချိန် မရလိုက်ဘူး။ မနေ့ကနဲ့ဆို ဒီတစ်ပါတ်အတွင်းမှာ နေ့လည်စာ မစားမိတာ ၃ ရက်တောင် ရှိသွားပြီပေ့ါ။
ညနေပိုင်းကျတော့ အလုပ်တွေ တဖြည်းဖြည်း ပြီးလာတာနဲ့ နည်းနည်း စိတ်အေးသွားရတယ်။ ရန်ကုန်က အသိတစ်ယောက် ရောက်နေတာသိလို့ ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့ သူတို့ ဘွန်လေးဘက်ကို လာဖို့ရှိတယ် ဆိုတာနဲ့ အလုပ်ဆင်းဖြစ်ရင် သွားဖို့ စိတ်ကူးထားလိုက်တယ်။ အလုပ်မပြီးရင်တော့ မသွားနိုင်ဘူးလေ။ အလုပ်တွေကို လက်စသပ်နေရင်း ပရောဂျက်ခေါင်းဆောင်က ညနေ ၅ နာရီခွဲလောက် ရောက်တော့ ပြန်မယ်ဆိုတာနဲ့ အတူ ပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ ဘွန်လေးကို လမ်းကြုံတာနဲ့ ၀င်ဖြစ်သွားတယ်။
ဂျူရောင်းပွိုင့်မှာ ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်လာရင်း ဖုန်းဆက်မေးတော့ ကော်ဖီဆိုင် ထိုင်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ ကော်ဖီဆိုင် လိုက်ရှာလိုက်တယ်။ ကော်ဖီဆိုင်မှာ နေးတစ်မြန်မာဖိုရမ်က မန်ဘာတွေနဲ့ စကားတွေ ပြောဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ပြောဖြစ်တာ များပြီး ကျွန်တော်ကတော့ နားထောင်ဖြစ်တာ များပါတယ်။ ညပိုင်းရောက်တော့ ရန်ကုန်က မှာလိုက်တဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ရှာဖို့ ဈေးဝယ်ထွက်ကြတယ်။ ဈေးပတ်ပြီး နောက်တော့ ကေအက်ဖ်စီမှာ ကြက်ကြော် ၀င်စားပြီး နေးတစ်ဖိုရမ်မန်ဘာတွေ အိမ်ပြန်ဖို့ ဘူတာဘက်ကို ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။
ဆေးကျောင်းသားတစ်ယောက် လူကြုံလှမ်းမှာတဲ့ ဆရာဝန်ကိုင်တဲ့ နားကြပ်ကို ၀ယ်ဖို့ ရန်ကုန်က ရောက်လာတဲ့ နေးတစ်ဖိုရမ်ထဲက အသိနဲ့အတူ သူတည်းနေတဲ့ဟိုတယ်ရှိရာ တရုတ်တန်းဘက်ကို လိုက်သွားခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်က လူကြုံထည့်ပေးလိုက်တဲ့ သိုးမွေးဆွယ်တာလေး လိုက်ယူတာလဲ ပါတာပေါ့။ အော်ထရန်ပတ်ခ် ဘူတာကနေ သူတို့တည်းတဲ့ ဟိုတယ်ကို အဆင့်ဆင့် ရှာပုံတော်ဖွင့်ပြီး အရောက်နှင်ခဲ့ကြသေးတယ်။ ဟိုတယ်ရောက်တော့ ခဏတဖြုတ် စကားပြောပြီး မူစတာဖါဘက်ကို ဈေးဝယ် ထွက်လာကြတယ်။ လိုအပ်တာတွေကို ၂၄ နာရီဖွင့်တဲ့ ကုလားကုန်တိုက်ထဲမှာ တိုးဝှေ့ပြီး ဈေးပတ်ဝယ်ဖြစ်တယ်။ ဈေးက အတော်လေးကို ချိုလွန်းလို့ အတုဖြစ်မှာတောင် စိုးရိမ်မိတယ်။ အပြင်ဈေးနဲ့ အတော်လေးကို ကွာတယ်ဗျာ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ညကြီးမိုးချုပ် ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားနေတာပေါ့။
ဒါနဲ့ မနက် ၃ နာရီလောက်မှာ အိမ်ပြန်ဖြစ်ကြတယ်။ လူကတော့ အတော်လေးကို ဘက်ထရီကုန်နေပြီ။ မျက်လုံးကို မနည်းဖွင့်ထား ရတာ။ တက်စီသမားနဲ့ လမ်းမှာ စကားပြော အိပ်ငိုက်ရင်း အိမ်ကို ၃ နာရီခွဲ ကျော်ကျော်လောက် ပြန်ရောက်တယ်။ သူတို့ ညဘက်မောင်းတဲ့ တက်စီသမား ဘ၀တွေကို အင်တာဗျူးရင်းပေါ့။ သူပြောတာက ညဘက်မောင်းရတာ ကားမရှုပ်ဘူး၊ အပူရှိန် သက်သာတယ်။ ဒါပေမယ့် မှောင်တဲ့အတွက် မျက်လုံး အားစိုက်ရတယ်ပေါ့။ ညဘက် ကားမောင်းရတဲ့သူတွေအဖို့ မိသားစုဘ၀ဆိုတာကို မခံစားရတော့ဘဲ ပိုက်ဆံပဲ ရှာနေရတဲ့ ဘ၀မျိုးပေါ့။ ကိုယ့်ကလေးတွေနဲ့ နေဖို့ အချိန်မရဘူး။ နောက်ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်ပတ်မှာ ခုနစ်ရက် မောင်းလို့ မသင့်ကြောင်း၊ အများဆုံး ၅ ရက်လောက်ပဲ မောင်းသင့်ကြောင်း အနားယူဖို့ ရက်ကို ထားသင့်ကြောင်း စတာတွေ ပြောပြပါတယ်။
သူတို့ဘ၀ကို သိချင်တာလည်းပါသလို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အင်္ဂလိပ်စာညံ့လို့ နားရည်ဝအောင် လေ့ကျင့်တဲ့ သဘောနဲ့ မေးခွန်းတွေ လျှောက်မေးနေတာလေ။ အဲ... ကိုယ်မေးတာတွေကို သူနားလည်ပေမယ့် သူပြန်ပြောတာတွေကိုတော့ လုံးစေ့ပတ်စေ့ အကုန်နားမလည်ဘူးဗျ။ အဲဒီလို သိုးဆောင်းဘာသာမှာ တော်တာလေ။ အဲဒီလို ကားဆရာနဲ့ စကားတပြောပြော လုပ်ပြီး အိမ်ရောက်လာတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ လျှော်စရာရှိတဲ့ တစ်ပါတ်စာ အ၀တ်တွေကို စက်ထဲထည့် လျှော်ပြီး ညောင်းချိချိနဲ့ အိပ်ရာဝင်ခဲ့တယ်လေ။ မနေ့ကပေါ့...
Posted by JulyDream at 3:33 PM 1 comment:
Posted by JulyDream at 9:54 PM 1 comment: